निशान न्युज श्रावण २२, 2077
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १.२९ अङ्कले घटेर एक हजार ३८१.३८ पुगेको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक ०.६३ अङ्कले घटेर २८९.५५ मा पुगेको छ । आज १८६ कम्पनीका २३ लाख ४१ हजार ७४६ कित्ता शेयर रु ९२ करोड नौ लाख ९७ हजार ५६ मा खरिदबिक्री भयो ।
कारोबार भएका कुल १२ मध्ये छ उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ भने छ उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ । बैंकिङ ३.९३ अङ्कले घट्दा व्यापार ९.२४, जलविद्युत् ४.१३, अन्य ३.०६, लघुवित्त १.५६ र सामूहिक लगानी कोष ०.०९ अङ्कले घटेका छन् । होटल ३३.८४, विकास बैंक १०.४, वित्त ४.०३, निर्जीवन बीमा ३१.८७, उत्पादन ३.५९ र जीवन बीमा ५०.८ अङ्कले बढेका छन् ।
कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल पुनरबीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो । सो कम्पनीको शेयर रु ११ करोड ८१ लाख १५ हजार १८८ मा खरिदबिक्री भयो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु आठ करोड ५४ लाख १६ हजार ७९४, एनआइसी एसिया बैंकको रु तीन करोड ९९ लाख ६१ हजार २०, एनएमबी बैंकको रु तीन करोड ६० लाख १० हजार २५८, आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रु दुई करोड ३७ लाख ५६ हजार १६६ र एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर रु दुई करोड १३ लाख नौ हजार ६५ मा खरिदबिक्री भयो ।
गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले आज सबैभन्दा बढी १० प्रतिशतले कमाए । यस्तै अजोड इन्स्योरेन्स ९.८२, नेपाल फाइनान्स ९.५५, ग्रीन डेभलपमेन्ट ७.४१ र दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरका शेयरधनीले ६ प्रतिशतले कमाए ।
यस्तै महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ६.०६ प्रतिशतले गुमाए । यस्तै स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था ५.६८, कालिका पावर कम्पनी ५.३६, अपि पावर कम्पनी ५.२६ र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले ५.२६ प्रतिशतले गुमाए ।
सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुस् कति पुग्यो आज ?
काठमाडौँ । आज बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १२०० रुपैयाँले घटे...
नेप्से परिसूचक मंगलबार दोहोरो अङ्कले लाग्यो ओरोलो
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार दोहोरो अङ्कले ओरोलो लागेको छ...
सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुस् कति छ आज ?
काठमाडौँ । मंगलबार सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। आजसुनको मूल्य एक हजार ७०० रुपैयाँले ओरा...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ६.१२ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । लगा...
इलामा । नेपालमा उत्पादित अलैँचीको ठूलो हिस्सा बाहिर निर्यात गर्नुपरिरहेका बेला अब भने अलैँचीलाई स...
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार : नेप्से परिसूचक ४.४७ विन्दुले ओरालो तर्फ
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि झिनो अङ्कले ओरालो लागेको छ । न...